Ukuhlaziya iPocophone F1 ukuya kwi-Android 9 kuya kwenzeka kule veki | I-Androidsis
El I-Pocophone F1 iyeyona ithengiswa kakhulu oko yasungulwa. Enye yeefowuni enexabiso elifanelekileyo lemali kwintengiso yeza nezinye iinkcukacha ezenza ukuba le fowuni ibe lolunye lolona khetho lufanelekileyo lokujonga ukuba ujonge isiphelo esinexabiso eliphezulu. Kwaye ukuba ifowuni entsha yeXiaomi yexabiso eliphantsi iza ngexabiso eliqhekezayo kwaye inehardware ekuphakameni kweyona inkulu. Egqibelele? kungekudala siza kukwazi hlaziya iPocophone F1 kwiPie ye-Android 9.
Ibingumvelisi ngokwakhe oqinisekisile ukuba Uhlobo oluzinzileyo kunye oluzinzileyo lwe-MIUI 10, ngokusekwe kuhlobo lwamva nje lwenkqubo yokusebenza kaGoogle, iya kufumaneka kule veki iphela.
Kule veki singahlaziya iPocophone F1 iye kwi-MIUI 10
Ngale ndlela, entsha ifowuni engabizi xiaomi Uya kufumana uhlaziyo olufanelekileyo kwakamsinya ukonwabela okona kulungileyo kuza nolu hlaziyo lutsha lwePocophone F1. Njengamaxesha onke, olu hlaziyo luza kufika nge-OTA ke konke okufuneka ukwenze kukulinda iXiaomi ukuqala ukukhupha i-MIUI 10 ukuze sihlaziye iPocophone F1. Gcina ukhumbula ukuba olu hlaziyo luza kuba nzima kakhulu, ke siyacebisa ukuba silukhuphele ngonxibelelwano lwe-WiFi kuba luya kudlula kwigig yokukhuphela.
Khumbula ukuba esi siginali sinamandla sinomzimba we-polycarbonate kodwa sisixhobo esinamandla ngaphakathi. Ukuqala, isikrini sayo se-6.18-intshi ye-LCD ifikelela kwisisombululo esigcweleyo se-HD + kwinkalo yayo ye-18: 9. Kule nto kufuneka songeze iprosesa yeQualcomm Snapdragon 845 kunye ne-6 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina eya kusivumela ukuba sihambise nawuphi na umdlalo okanye usetyenziso ngaphandle kweengxaki kule fowuni inamandla ifumaneka ngexabiso eliphambili kwiAmazon: 309 euro. Kwaye ngoku kungekudala sinako hlaziya iPocophone F1 kwi-Android 9 e enkosi ekufikeni kwe-MIUI 10, ulinde ntoni Akukho mveliso ifunyenweyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Kungekudala uza kuba nakho ukuhlaziya iPocophone F1 kwiPie ye-Android 9